Oji Station, Tokyo (26th Feb)
English • Mar 1, 2022
TTAJは普段募金は受けておりませんが、日本人は親切で寄付してくださったため受け入れました。 また、日本人のアパレルグッズ製作者 Stand Up With Youさんから、ハンドサインアイテムの売り上げから ¥3,000の寄付をいただきました。応援ありがとうございます。
"People have no one but people themselves!" ✊🏻
We TTAJ undertook our weekly pamphlets and tissues sharing activity on this week Saturday (2022/2/26) at Oji Station.
TTAJ did not do Fund Raising but we had to accept the donation from generous Japanese Donors. In addition, we receivedadonation of ¥ 3,000 from the sales of hand-signed items from Japanese apparel goods maker "Stand Up With You". Thank you for your kind support.
The total of 50,000 Yen Fund will be transferred to the places where the humanitarian aids are needed.
Despite the Icy wind, cold weather, we would like to express our deepest gratitude to our volunteer brothers and sisters, and the camera men who came to record and support us weekly.
We were able to hand out approximately 100 pocket tissues and pamphlets from 12:00am-14:00pm.
ယမန်နေ့ ၂ လပိုင်း ၂၆ ရက်နေ့မှာ TTAJ အဖွဲ့အနေနှင့် Pamphlets / Pocket Tissue ဝေတဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို Tokyo / Oji ဘူတာမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ် ။
TTAJ အဖွဲ့အနေဖြင့် အလှူငွေ ကောက်ခံခြင်းမရှိသော်လည်း စေတနာရှင် ဂျပန်လူမျိူးများမှ အလှူငွေ လာရောက်ထည့်ဝင်ကြတာမို့ လက်ခံယူခဲ့ပါတယ်။ ဂျပန်လက်မှုပညာရှင် "Stand Up With You"ထံမှလဲ လက်မှုပစ္စည်းများကို ပြုလုပ်ရောင်းချငွေ ယန်း ၃,၀၀၀ကို အလှူငွေအဖြစ် လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။
လက်ခံရရှိသမျှ အလှူငွေ စုစုပေါင်း ၅၀,၀၀၀ ယန်းကို စစ်ဘေးရှောင်များအတွက်ရိက္ခာအလှူငွေအဖြစ် လွှဲပြောင်းပေးအပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။
လေတွေတိုက်ပြီး ရာသီဥတု အေးစက်နေတဲ့ကြားက တကူးတက လာရောက်ကူညီ အားဖြည့်ပေးခဲ့ကြသော Volunteers ညီအကို မောင်နှမများ ၊
အပတ်စဉ်တိုင်း လာရောက်အားဖြည့်ပေးပါသော ဓာတ်ပုံ/ဗီဒီယို မှတ်တမ်း ရိုက်ကူးပေးပါသော Camera သမား များအားလုံးကို TTAJ မှ အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် ။
Pamphlets လက်ခံယူတဲ့ဂျပန်ပြည်သူ/သားများ စိတ်ချရစေရန် Volunteers များအားအပူချိန်တိုင်းတာခြင်း၊ စနစ်တကျ လက်ဆေးခြင်း၊ လက်အိတ်များဝတ်ဆင်ခြင်းဖြင့် Corona ကူးစက်မှု မပြန့်ပွားစေရန်အတွက်လည်း အထူးဂရုစိုက်ပြီး လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ် ။
နေ့လည် ၁၂ နာရီ ခွဲ မှ ၂ နာရီ အတွင်း
လက်ကမ်းစာစောင်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်၊ တစ်ရှူး အခုရေ ၁၀၀ ကျော်ကို ဂျပန်ပြည်သူ/သားတွေ လက်ဝယ်အရောက် ဝေငှပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။